Real Madrid waxa ay doonaysaa in Greth Bel iyo lacag ay isugu darto si ay ula soo wareegto Mohamed Salah.
Wednesday, January 23rd, 2019 - 20:27:05
Tuesday May 15, 2018 - 12:46:23 in Wararka by
Kooxda reer Spain Real Mafrid ayaa waxaa lagu soo waramaya in ay qaab ciyaareed kasta ay ku soo bandhigayso Gareth Bel, si ay u hesho ciyaar-yahanka garabka ugu ciyara kooxda Liverpool Mohamed Salah.
Saalax ayaa waxa uu xiili ciyaareedkan soo bandhigay qaab ciyaareed fiicaan waxa uuna dhaliyay 32 gool 44 kulan oo u saftay kooxda Liverpool sidaana ku hantay Kabta dahabka ee Premier League-ga waxa uuna finalka koobka qaaradda yurub keenay kooxdiisa oo ay laciyaari doonaan Real Madrid.
Kooxda Real ayaa waxa ay xooga saaraysaa sidii ay ku heli lahayd weerar yahanka cajiibka ah xagaagan.
Xidigan reer masar ayaa waxa uu ku guulaystay abal-marinada PFA iyo FWA ee sanadkiiba lasiyo xidiga ugu wanaagsan, waxaana uu Doon Boon uu sheeay in Los Blancoska ay diyaar u tahay in ay bxiso dalab lacageed loogu talo galay ciyaar yahanka.
Madax waynaha kooxda Real Madrid Florentino Perez ayaa waxa uu ku qiimeeyay xiddiga Gareth Bell 90 Milyan oo yuuro una dhiganta €90m (£79m waxa uuna doonaya in uu ku daro 50milyan oo gani si uu usii wato Maxamed Salax.
Si kastaba ha ahaatee, Liverpool ayaa horay u diiday fikradda ah inay iska iibiso 25 jirkaan qiimo kasta, waxaana la aaminsan yahay inay soo bandhigtay dalab 200 milyan oo ginni ah - oo la mid ah rikoorka Neymar ee u dhaqaaqay Paris Saint-Germain xagaagii lasoo dhaafay. xitaa kooxda u keen miiska.
Liverpool iyo Real Madrid ayaa isku diyaarin doona inay finalka Champions League ku wajahaan Kiev 26ka May.